Kamerona: Nikarakara ny fiarovany i Maurice Kamto - mpampita ny teles
Kamerona: Nikarakara ny fiarovany i Maurice Kamto
Nosamborina tao an-trano nanomboka ny 20 septambra lasa teo, ny mpitarika ny MRC dia ahiahiana ho "mpitondra tetik'asa fikomiana hanonganana ireo andrimpanjakana".
De facto napetraka am-ponja trano, satria nanodidina ny tranony tao Yaoundé ny mpitandro ny filaminana nanomboka ny 20 septambra, dia tsy niseho imasom-bahoaka i Maurice Kamto nanomboka tamin'io daty io ary noho izany dia tsy nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana lehibe izay antoko dia niantso tamin'ny 22 septambra.
Tsaho momba ny fisamborana
Mpikambana sivy tao amin'ny vondrona mpisolovava azy no afaka nihaona taminy tamin'ny 28 septambra. Ny fotoana hanomanana ny fiarovan'ny mpitarika ny Hetsika ho an'ny Renaissance of Cameroon (MRC) raha, nandritra ny andro maromaro, ny firenena iray manontolo dia nitabataba noho ny tsaho momba ny fisamborana tsy ho ela ny mpanohitra, ary koa ireo mpanohana azy maro. , izay voasambotra tamin'ny fomba mahomby tamin'ny 22 septambra.
I Maurice Kamto dia mbola tsy voapanga ara-dalàna saingy, ny 27 septambra, niantso ny mpisolovava Hyppolyte Meli, ny lehiben'ny polisy Kameroney Martin Mbarga Nguele sy ny mpiara-miasa aminy Galax Yves Etoga filohan'ny vondrona mpisolovava izay miantoka ny fiarovany.
Ny fifanolanana an'i Kylie Jenner Billion Dollar, ny olana "Idiot" an'ny Barstool Sports, Andininy faha-13 & The EUCD - Video